Ha eedeyn CMS-da, Eedee Mawduuca Naqshadeeyaha | Martech Zone
Subaxaan waxaan wacay macmiil macquul ah oo ku saabsan iyaga xeeladaha suuq geynta. Waxay xuseen inay la kulmayaan shirkad si ay u horumariyaan degelladooda. Waxaan ogaaday kahor wicitaanka inay durbaba shidan yihiin WordPress oo la waydiiyey inay sii wadi doonaan isticmaalkeeda. Waxay tiri gabi ahaanba maya oo waxay tidhi waa wax aad u xun… waxba kuma qaban karto barta ay rabto. Maanta waxay la hadlaysaa shirkad horumarin doonta Mashiinka Muujinta.
Waxay ahayd inaan sharaxaad ka bixiyo inaan la shaqeynay Mashiinka Muujinta si ballaadhan, sidoo kale. Waxaan sidoo kale la shaqeynay Joomla, Drupal, Suuqa, Imavex iyo nidaamyo badan oo maareynta maadooyinka ah. In kasta oo qaar ka mid ah nidaamyada CMS ay u baahdeen xoogaa daryeel jilicsan oo naxariis leh si looga faa'iideysto dhammaan faa'iidooyinka raadinta iyo bulshada, waxaan ogaanay in inta badan nidaamyada CMS loo abuuray si isku mid ah… runtiina waxaa kaliya ku kala soocan shaqeynta maamulka iyo sahlanaanta isticmaalka.
Waxaan jeclaan lahaa inaan sharad ku dhigo in macmiilkani uu ku guuleysan karo wax kasta oo ay jeclaan lahayd WordPress. Dhibaatadu ma ahan WordPress, in kasta oo ay tahay sida mawduuceeda loo horumariyey. Hal macmiil oo aan bilownay inaan dhowaan la shaqeyno waa shirkad VA Loan Refinance. Iyagu waa shirkad weyn - lacag dib ugu celisa samafalayaasha halyeeyada mar kasta oo ay soo ururiyaan tixraac. In kasta oo aan sameyno hal tan oo ah qaabeynta WordPress, waxaan si caddaalad ah u ogaan karnaa in macmiilku ku yeelan karo degel qurux badan, la hagaajin karo, oo la isticmaali karo oo ku saabsan CMS kasta sida ay u awoodaan WordPress. WordPress si fudud ayaa caan u ah hadda markaa waxaan isku aragnaa inaan ka shaqeyno wax badan oo ka mid ah barxadda marka loo eego kuwa kale.
Amaahda VA waxay soo iibsadeen mawduuc caado ah ka dibna waxay na shaqaaleysiisay si aan u horumarino raadintooda iyo istaraatiijiyado bulsheed. Mawduucu wuxuu ahaa mid masiibo ah use aan la isticmaalin qarka, menus, ama widget. Cunsur kastaa si adag ayaa loo calaamadeeyay shaxankooda iyadoo aan la adeegsan mid ka mid ah astaamaha waaweyn ee WordPress ay ku habboon tahay. Waxaan ku qaadanay labada bilood ee soo socota dib u habeynta mowduuca, isdhexgalka Foomamka cuf leh Leads360, oo xitaa waxay soosaaraysaa wijigil dib u soo ceshanaysa sicirka amaahda ee ugu dambeeyay si ay ugu muujiyaan boggooda bangigooda.
Tani waa dhibaato nidaamsan oo leh naqshadeeyayaasha mawduucyada iyo hay'adaha. Waxay fahansan yihiin sida looga dhigi karo goob muuqaal wanaagsan, laakiin maahan sida si buuxda looga faa'iideysto CMS si loogu daro dhammaan astaamaha kala duwan ee macmiilku hadhow rabo. Waxaan arkay Drupal, Mashiinka Muujinta, Xoriyada Accrisoft, iyo goobaha MarketPath oo labaduba qurux badnaa oo la isticmaali karo… sababtuna maaha CMS-da, laakiin sababta oo ah shirkadda samaysay mawduuca waxay khibrad u lahayd inay ku darto dhammaan astaamaha CMS ee ka faa'iideysanaya raadinta, bulshada, bogagga degitaanka, foomamka, iwm ee laga yaabo inay noqdaan loo baahan yahay.
Naqshadeeye mawduuc wanaagsan ayaa horumarin kara mawduuc qurux badan. Naqshadeeye mawduuc weyn ayaa horumarin doona mawduuc aad isticmaali karto sannadaha soo socda (oo aad si fudud ugu tahriibi karto mustaqbalka). Ha eedeyn CMS, eedee naqshadeeyaha mawduuca!
Tags: sentimitirnidaamka maamulka contentdrupalFoomamka culayskaimavexmarketing inbounddhexgalkaJoomlasuuqathemenaqshadeynta mawduucaWordPress
22 Siyaabood oo Loo Abuuro Mawduuc Adag
Feb 22, 2012 markay ahayd 3:51 PM
Ciddiyaha madaxa. Waxaan ku horumarineynaa 90% mashruucyadeena WordPress waxaana jira waqtiyo aad maqli doontid faallooyin sidan oo kale ah iyo waxyaabo ay ka mid yihiin “Hagaag, ma sameyn karto __________” Dabcan jawaabta saxda ah ayaa ah, "Haddii aysan jirin wax horey u jirin oo ku habboon baahiyahaaga (mawduuca iyo / ama fiilooyinka), iyo haddii soo-saarahaagu yaqaanno sida loo isticmaalo API, waxaad sameyn kartaa wax badan oo aad rabto inaad sameyso ilaa waqtiga iyo miisaaniyadda halkaas.
Laakiin marmarka qaarkood macmiilku wuxuu maskaxdiisa ku hayaa wax “cusub”, markaa waad la rogrogmi kartaa ama diidi kartaa.
Febraayo 23, 2012 saacadu markay tahay 10: 08 AM
Taasi waa mid xiiso leh. Ka dib markaan bilaabay shaqada Reusser Design, waxaan si weyn ugu beddelay ka shaqeynta gudaha EE, CMS-keena aan dooranay, oo aan ka soo qaatay WordPress, oo aan inta badan la shaqeyn jiray markii aan keligey ahaa. Waan kugu raaci lahaa adiga mawduucyadayda WP waxay sameeyeen dhammaan farqiga. Waxyaabaha la mid ah mawduuca 'WooTheme's Canvas', tusaale ahaan, waxay ahayd mid aad u wanaagsan in laga dhex shaqeeyo, halka ay jiraan qaar kale oo ah "qiimo-sare" iyo mawduucyo caado u ah oo halkaas ka socda oo kaliya ick icky ah.
Taas oo la dhaho, runtii waxaan u jeclahay EE maamulka maareynta waxyaabaha ku jira websaydhka, xaaladaha "blogging" aysan mudnaanta lahayn. Way fududahay, waa xarrago, waana hab ka xoog badan WP, waxaan qabaa. Weli, markaad wax badan oo qoraal ah ama baloog gareyn ah ku dhex sameyso CMS-gaaga, waxba kama badiyaan khibradda isticmaale ee WP ee qoraagaas.
Waad ku mahadsantahay qoraalkaaga!
Feb 28, 2012 markay ahayd 10:26 PM
@awelfle: disqus Waan yara yara murugsanahay markay tahay EE, waxaa hubaal ah in badan oo qoran ayaa loogu talagalay horumariyeyaasha MVC. Aniga oo taas maskaxda ku haya, waxaan fahamsanahay in horumarku xoogaa ka saaxiibtinimo badan yahay isla markaana la qiyaasi karo oo aanu ahayn arrin badan. Maaddaama aanan naftayda uga fikirin sidii horumariye rasmi ah, waxaan u jihaystaa waxyaabaha fudud ee aan u baahnayn fikir badan (laakiin si daacadnimo leh u sababi kara dhaawac intaa ka sii badan!).
Feb 28, 2012 markay ahayd 4:54 PM
Boggan wuxuu u muuqdaa inuu yahay nooc la beddelay oo ah TwentyEleven. Arrinku ma sidaas baa? Si kastaba ha noqotee, waad saxantahay; waa wax ku saabsan mawduuca, ee maahan CMS. Laakiin WordPress, IMHO, ayaa ah barmaamijka ugu fiican ee xilligan la shaqeeya.
Feb 28, 2012 markay ahayd 6:56 PM
Indho wanaagsan, @jonschr: disqus! Waa mawduuc aad u habeyn badan oo TwentyEleven ah… runtii waan jeexjeexnay! Kaliya nama soo gaadhin inaan qarino dhammaan magacyada mawduuca. Waxaanan jecelahay xaqiiqda ah inaan dadka wanaagsan ka siinno @Wordpress: ka taxaddar dareenka ay mudan yihiin.
Feb 28, 2012 markay ahayd 9:40 PM
Xiisaha darteed: Waxaan halkaan ku imid anigoo adeegsanaya bogga tooska ah ee degitaanka HTML kaasoo ku soo jiiday quudintan. Maxaa diidaya inay toos u dhexgalaan? Taasi waa mid ka mid ah sawirada 'WordPress' ee ugu weyn aniga; qaabab bogag kala duwan ah shahaado kasta oo aad doorato.
Feb 28, 2012 markay ahayd 10:24 PM
Nabadeey @jonschr: disqus - meeye bogga degitaanka? Waxaan ku daabacnaa iskuxirayaasha boggaga sida http://www.corporatebloggingtips.com laakiin waxaan rabaa inaan diirada saaro taraafikada hal ilo. Waxaan jeclaan lahaa inaan halkaan ku haysto taraafikada oo dhan, waxaan ku riixi lahaa awoodda boggan, waxaanan hubin lahaa in xiriir kasta oo ka dambeeya uu ku riixo boggan matoorada raadinta. Rajaynaynaa in waxa aad u jeedo! Haddii aan wax ku daabaco degmooyin badan, waxaan kala qaybsanayaa maamulkaas… Waxaan jeclaan lahaa inaan helo 1 degel xoog leh halkii aan ka heli lahaa 2 kuwa daciifka ah.
Febraayo 29, 2012 saacadu markay tahay 12: 16 AM
Haa, taasi waa tan! Hmm. Macno ayuu samaynayaa… In kastoo, markaa, haddaba, maxaa diidaya inaad si fudud uga dhigto “bogga degitaanka” bogga tusmada ee boggan? Dembi haba yaraatee looma jeedin; kaliya ayaa la yaabay waxa faa'iido ah. Waan jeclahay bogga degitaanka, BTW. Mid aad u fiican.
Febraayo 29, 2012 saacadu markay tahay 8: 46 AM
@jonschr: disqus wax dambi ah looma qaban gabi ahaanba! Waad la yaabi kartaa inaad ogaato taasi waa bogga WordPress, sidoo kale. Oo waxaa jira tan bogag gudaha ah oo u muuqda matoorada raadinta. Waqtiga buugga la sii daayay, waxay ahayd wax caadi ah in la helo bog degitaan gaar ahaan loogu talagalay buugga. Waxaan rabay inaan lahaado degmo kaliya loogu talagalay "blogging company" oo sifiican ayey u shaqeysay. Waxaan rabay in waxyaabaha ku jira ay si joogto ah ugu cusbooneysiiyaan goobta laakiin ma aanan dooneynin inaan qoro baloog kale gebi ahaanba - sidaa darteed soo jiida quudinta, isgaarsiinta bulshada, iyo u isticmaalkeeda sida jadwalka dhacdooyinka marwalba si joogto ah ayey isu beddelayaan. Waxay ujirtaa si aad u wanaagsan dhowr shuruudood sidaa darteed way qabatay shaqada waxayna sii wadaa iibinta buugaagta annaga!